【Cyber's Isniinta 2022】 Deals Super ee Shiilan-la'aanta Saliidda
Haddii aad raadineyso Shiilan bilaa saliid ah maalinta Cyber ​​​​Isniinta markaa ma waayi kartid wax walba oo aan kuu hayno. Shaki la'aan, shiilan noocan oo kale ah ayaa noqday aasaas weyn oo maalinteena ah. Sababtoo ah waxay ku karsadaan saliid la'aan ama hal qaado oo ka mid ah. Markaa waxay leeyihiin akhlaaqo badan.
Si aad u badan si haddii aad rabto in aad isku daydo, ka dibna ma jiraan wax la mid ah u ogolaan naftaada in la qaado by kuwa daqiiqado halkaas oo ah dhimis way joogaan. Mid ka mid ah Isniinta aadka loo filayo ee sanadka ayaa timaada. Haa, rumayso ama ha rumaysan, sidoo kale Isniinta waxyaabo gaar ah ayaa dhici kara sida kuwa aan hoos kaaga sheegi doono.
Cyber ​​​​Isniinta ee shiilan bilaa saliid ah
Haddii aad mid doonaysay Shiilan bilaa saliid ah maalinta Cyber ​​​​Isniinta, kuwa aad hoos ka heli doonto ayaa maanta si weyn u dhimay qiimahooda:
Goorma ayay tahay Cyber ​​​​Isniinta
Had iyo jeer waxaa jirta maalin isniin ah oo naga dhigi karta dhoola cadeynta. Markaynu hore u sii soconay, inkastoo ay mar walba ka mid tahay maalmaha qof walba neceb yahay, haddana waxaad mooddaa in sanadkan uu ka soo laabtay albaabka weyn. Cyber ​​​​Isniinta Waxaa la dabaaldegaa Isniinta, Noofambar 29, 2021. Waa run in sidoo kale inta badan loo yaqaan Isniinta Buluugga ah.
Waa kan Isniinta ka dib Thanksgiving iyo sida oo kale, ilaa maalinta Black Friday. Markaa waxa la odhan karaa waa sabtida iyo axadda dheer oo damaashaadka iyo qiimo dhimista ay noqon doonaan sida ay maalintu u socoto. Dukaamada iyo shirkadaha kale waxay ahaayeen kuwa kor u qaaday wax iibsiga sida kuwan oo kale ah, oo dhan ka sarreeya, si loogu dhiirigeliyo dadka inay wax ku iibsadaan internetka. Sababtoo ah Cyber ​​​​Isniinta waa maalin kale oo na siisa fursad aan ku helno waxa aan raadineyno, wax ka yar.
Maxaa qiimo dhimis ah oo aan ku heli karnaa shiilan saliid la'aanta ah ee Cyber ​​​​Isniinta
Waa run in Black Friday ka dib nala siiyo hal fursad oo kale oo aan ku qabsan karno qalabka sida shiilan aan saliid lahayn ee Cyber ​​​​Isniinta. Sidaa darteed, waa inaan u oggolaan inay baxsadaan. Fikradda ayaa ah in Jimcaha Black Friday taxane qiimo dhimis ah ayaa iftiimin doona dhammaantood. Sida caadiga ah, ma bixin karno qiimo wareeg ah, laakiin waxaan u dhowaan karnaa qiimo dhimis halkii ay ka ahaan lahaayeen kuwa gaar ah oo ka bilaaban doona qiyaastii 15% ilaa 60%. Markaa inta lagu guda jiro isniintan, oo maanta ah jilaageena, soo jeedintu way sii socon doontaa.
Laakiin dabcan, si loo kala saaro jimcaha, waa run in qiimo dhimista la xoojiyay wax yar. Sidaa darteed, shiilanyada aan saliidda lahayn ee lahaa qiimo dhimis hoose saddex maalmood ka hor, Isniinta, Noofambar 30, ayaa kor u kici doonta. Markaa waxaanu awood u yeelan doonaa inaanu ku iibsano dalab weyn. Laakin ka digtoonow, sababtoo ah waa caadi ilaa kaydka la dhammeeyo, taas oo macnaheedu yahay in alaabta la dhammayn karo ka hor intaadan ka fikirin laba jeer. Markaa waxaad horeyba u ogtahay in kiisaskan, ay fiicantahay inaadan ka labalabeyn markaan aragno dalab wanaagsan.
Waa maxay shiilan saliid la'aan ah oo aan ka iibsan karno Cyber ​​​​Isniinta?
Shirkaddan oo ay iska leedahay kooxda Maraykanka ee Vesync, oo leh dhawr nooc sida Levoit ama Etekcity, waa soo-saare weyn oo qalabyada guryaha yar yar ah, gaar ahaanna u taagan shiilanteeda hawada ee aan u baahnayn saliid. Doorasho weyn haddii aad raadinayso qalab bixiya tayada, natiijooyin wanaagsan iyo hawlo caqli-gal ah si loo fududeeyo shaqadaada jikada.
Bixinta Isniinta Cyber
Qalabka korantada ee yaryar iyo sidoo kale alaabta guriga ayaa ah suudhka adag ee Cecotec. Markaa la yaab maaha in marka aan ka hadalno shiilan bilaa saliid ah Cyber ​​​​Isniinta, sidoo kale waa ka badan yihiin hadda. Waad ku mahadsan tahay baaxaddeeda ballaaran, waxay u suurtagashay in ay ku guuleysato dhammaan macaamiisheeda iyo kiiskan, waxay nagu farxisaa fryer aad u gaar ah oo tayo sare leh. Awoodda 3 litir, waxaad ku karsan kartaa laba heer, oo leh lakab dhoobo ah, taas oo ka dhigaysa shiilan mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah. Badbaadinta wakhtiga iyo maaddooyinka sida saliidda.
Waxaan sidoo kale gelinay nafteena gacmo wanaagsan sababtoo ah waa mid ka mid ah calaamadaha nolosheenna oo dhan oo ay sii wadaan inay sidaas sameeyaan. Alaabooyinka ay ka buuxaan hal-abuurnimada tignoolajiyada iyo waliba tayada sare waa waxa aan heli karno. Sidaa darteed, shiilanaha saliidda lahayn ee AirFryer sidoo kale kama dambayn. Waxay leedahay cabbir XXL ah, markaa waxay lama huraan u tahay qoyska oo dhan. Laakin intaas kuma koobna ee waxa u dheer in aad shiilayso waxa kale oo aad dubtaa oo aad dubtaa cuntada aad jeceshahay laakiin iyada oo aan lahayn wax baruur ah. Waad awoodaa shiilan hilibka, kalluunka iyo diyaarinta macmacaan kala duwan.
Soo saaraha Faransiisku wuxuu nolosheenna ku jiray tan iyo 50-kii. Markaa tobankii sano ee la soo dhaafay ayaa ka fiicnaaday kii hore, marka la eego hal-abuurka iyo alaabada cusub. Xaaladdan oo kale, waxay sidoo kale leedahay moodooyinka shiilan ee aan saliid lahayn kuwaas oo si fiican u qalma in la ogaado. Waxaa jira dhowr nooc oo aad ka heli karto, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa ah midka awooda ku kari laba heer, sababtoo ah shaki la'aan, waxay naga badbaadin doontaa waqti badan. Waxay leedahay guddi kontorool iyo awoodda 1,5 litir oo lagu daray 140 W oo koronto ah. Maxaa kale oo aan codsan karnaa?
In kasta oo aan ku aragno cabbirkeeda is haysta, waa in aynaan ka welwelin sababtoo ah way awoodaa u kari 4 ilaa 6 qof. Iyada oo leh qaabab iyo barnaamijyo dhowr ah, kuwaas oo ka dhigi doona suxuuntayada mid aad u badan. Markaa hal-abuurku isna dhinac ayuu naga ahaan doonaa. Intaa waxaa dheer, waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in Moulinex uu sidoo kale lahaa bilowgiisii ​​50-meeyadii waana mid ka mid ah shirkadaha ugu caansan ee waqtiga oo dhan. Hadda, wuxuu rabaa inaan sii wadno inaan nolosha ka dhigno wax yar, iyada oo ay ugu wacan tahay shiilan-la'aanta saliidda ee Cyber ​​​​Isniinta. Taasi waa sababta ay tahay wakhtigaas si aad u hesho dalab wanaagsan.
Waa maxay sababta shiilan-la'aanta saliidda uu mudan yahay in la iibsado Cyber ​​​​Isniinta
Shiiliyeyaashan hawada, ama shiilan bilaa saliid ah, waxay xaqiijiyaan inay samayn karaan cunto iyada oo aan lahayn dufan aad u badan, hoos u dhigaya ilaa 75% calories marka la barbardhigo shiilan qoto dheer oo caadi ah. Intaa waxaa dheer, waxay kaa caawin doonaan inaad kaydiso saliidda, waxayna aad u fududahay in la nadiifiyo oo la ilaaliyo. Fikrad aad u fiican haddii aad rabto inaad wax ku karsato hab caafimaad leh guriga, oo aad ku samayn karto wax walba. Laga soo bilaabo baradhada, bur burka, karootada, digaaga la tumay, kalluunka burka leh, baalasha, iwm.
Dhibaatadu waxay tahay in qaar ka mid ah shiilanyadan ay u muuqdaan inay leeyihiin qiimo aad u sarreeya marka loo eego kuwa caadiga ah, gaar ahaan kuwa ku qalabaysan hawlo horumarsan, sida shaashadda taabashada, isku xirnaanta, iwm. Laakiin maahan inaad ka tagto cunto caafimaad leh oo aad haysato mid ka mid ah qalabkan jikadaaga, tan iyo markii Cyber ​​​​Isniinta waxaad heli doontaa dalabyo badan ee noocyada ugu muhiimsan ee dukaamada online.
Talooyin ku saabsan Doorashada Fryer-ka Saliid la'aanta ah ee Cyber ​​​​Isniinta
Haddii aad raadineyso doorashada shiilan aan saliid lahayn oo wanaagsan Inta lagu jiro Cyber ​​​​Isniinta, waxaad ku heli kartaa iibsi caqli badan adoo raacaya talooyinkan:
Waxa ugu horreeya waa in aad ka fikirto nooca iyo nooca hawo-shiidiyaha adiga kugu habboon, marka loo eego shaqadeeda, noocyada cuntada ee la oggol yahay, haddii ay dambiil haysato iyo haddii kale, haddii ay haysato majarafad aad ku guurto iyo haddii kale, iyo waxyaabo kale oo dheeraad ah. hawlaha. Marka aad hesho cad, waa inaad sidoo kale ka fikirtaa inta qof ee aad sida caadiga ah u karisid, si loo go'aamiyo awoodda lagama maarmaanka ah.
Hadda oo aad ogtahay moodooyinka fryer-ka ee lagu waafajin karo waxaad raadineyso, waxa xiga ayaa ah in la go'aamiyo midka ku jira xadka miisaaniyada ee aad u dejisay Cyber ​​​​Isniinta. Xasuusnoow in aad haysato qiimo dhimis wayn, xataa kuwa aan sida caadiga ah gaadhin laga yaabo inay ku jiraan xadkaaga.
On Cyber ​​​​Isniinta, dhex mara dukaamada online-ka ah ee ugu waaweyn halkaas oo kuwan shiilan saliid-la'aanta ah ay diyaar ku yihiin si loo barbardhigo dhammaan dalabyada ku habboon moodooyinka la doortay. Markaa waxaad naftaada u bilaabi kartaa dalabka ugu fiican, adigoon ku dhicin midka ugu horreeya ee aad aragto, kaas oo aan ahayn inuu noqdo midka ugu habboon.
Dhanka kale, waa inaad si degdeg ah u dhaqantaa oo ha ka tagin daqiiqadaha ugu dambeeya ama waxaa laga yaabaa inaad ka baxdo kaydka ama dalab la'aan. Sidoo kale, si taxadar leh u akhri shuruudaha gaarka ah ee dukaanka, maadaama ay isbeddeli karaan Cyber ​​​​Isniinta.
Dukaammada dhimaya shiilan-la'aanta saliidda ee Cyber ​​​​Isniinta
Amazon: Kooxda weyn ee internetka waxay yeelan doontaa qiimo dhimis dhowr maalmood bisha Noofambar, oo ku dhammaan doonta Cyber ​​​​Isniinta. Sidaa darteed, shaki la'aan, waxay noqon doonaan kuwo jilicsan sida sannad kasta ama laga yaabee, midkan in yar oo dheeraad ah si aan uga tago dhadhan fiican afkeena. Waa maxay faa'iidada weyn? Taasi halkan waxaad ka heli kartaa noocyo badan oo shiilan oo aan saliid lahayn. Noocyo badan ama ka yar oo is haysta, oo leh hawlo badan laakiin dhamaantood ka yimid magacyo muhiim ah iyo natiijooyin fiican. Qiima dhimista lafteedu way kala duwanaan kartaa laga bilaabo 21%.
Maxakamada Ingriiska: Haddii mid ka mid ah uu yahay Giant online, kiiskan waa weyn kale sida dukaanka waax. Waxa kale oo ay yeelan doontaa in ay sumcaddeeda ugu fiican ee noocyada ugu fiican iyo iyaga, qiimo dhimis wanaagsan oo aadan meel iska dhigi karin. Waxay u muuqataa in ganacsiga asalka ah ee qoyska uu horumaray oo uu sii wado inuu u keeno sida ugu fiican macaamiishiisa. Markaa waxaad ka heli kartaa shiilan bilaa saliid ah, noocyo kala duwan iyo astaamo badan oo hadba baahidaada tahay.
Wareejisay: Qalabka guriga iyo elektiroonigga labadaba waa labada hab ee ugu muhiimsan ee silsiladdan Bortuqiisku. Waxaa la furay bartamihii 90-meeyadii inkastoo ay yaraayeen haddana waxay lahayd heer aad u wanaagsan. Halkan waxaad ka heli kartaa moodooyinka Fryer-ka ee Tefal oo qiimahoodu aad u heersareeyo. Markaa ma dhibayso inaad taas maskaxda ku hayso markay Cyber ​​​​Isniinta bilaabanto.
mediamarkt: Iibinta kombuyuutarrada iyo elektiroonigga ama qalabka guryaha labadaba waxay ku sifoobaan shirkaddan. Aasaaskeedu wuxuu dhacay dhamaadkii 70-meeyadii, inkastoo aysan ahayn ilaa dhamaadkii 90-meeyadii markii ay soo caga dhigatay dalkeena. Tan iyo markaas waxay noqotay mid kale oo muhiim ah. Dhanka shiilanyada aan saliidda lahayn, waxa kale oo aad ka heli doontaa Mediamarkt qiimo jaban.
Lidl: Mararka qaarkood silsiladda supermarket-ka ee Spain ka timid ee Jarmalka ka timid ayaa aad nooga yaabsa. Sababtoo ah marka lagu daro alaabta aasaasiga ah, waxay sidoo kale na siinaysaa fikrado ah qaabka alaabta guriga oo aan diidi karno. Xaaladdan oo kale, shiilan aan saliid lahayn ayaa noqon doona mid aad u weyn. Sababta? Sababtoo ah waxay haysaa wax kasta oo aad u baahan tahay: 9 hawlood sida dubay, shiil, browning ama karinta iyo kuwo kale. Iyada oo leh qiimo kaa yaabin doona!
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » Cyber ​​​​Isniinta shiilan saliid la'aan ah